Awerɛhodi Bere: Wudi Awerɛhow a Ɛyɛ Bɔne Anaa?
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ɔyare bi abɔ wo pɛn? Ebia ankyɛ koraa na wo ho tɔɔ wo, enti ɛho asɛm afi wo tirim. Nanso sɛ wo biribi wu na woredi awerɛhow a, ɛno de ɛnyɛ ɛnnɛ ne ɔkyena asɛm. Nhoma bi a Dr. Alan Wolfelt kyerɛwee mu no, ɔkae sɛ: “Awerɛhodi de, ‘entumi mfi hɔ korakora,’” nanso “sɛ bere pii twam na nkurɔfo nso kyekye wo werɛ a, w’awerɛhow no so bɛtew.”—Healing a Spouse’s Grieving Heart.
Wo de, yɛnhwɛ nea agya panyin Abraham yɛe bere a ne yere wui no. Bible ka sɛ: “Abraham fii ase gyam Sara na osuu no.” (New World Translation, 2013 Edition) Asɛm “fii ase” a wɔde dii dwuma wɔ ha no betumi akyerɛ sɛ ɛnyɛ da koro na Abraham dii Sara wu no ho awerɛhow; ɛbɛyɛ sɛ ɛkyɛe. * Yakob nso, bere a ne mma no daadaa no ma onyaa adwene sɛ aboa bi akyere Yosef awe no, odii awerɛhow “nna pii,” na obiara antumi ankyekye ne werɛ. Mfe pii twaam, nanso Yosef wu no amfi Yakob tirim.—Genesis 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.
Abraham yere Sara wui no, osuu no
Sɛ wo biribi awu ama ayɛ wo yaw paa a, wubehu sɛ nea yɛreka yi yɛ nokware. Ma yentie nnipa mmienu bi anom asɛm.
“Me kunu Robert nyaa kar akwanhyia wui July 9, 2008. Anɔpa biara sɛ me kunu rebɛkɔ adwuma a, yɛpɛ biribi di a na yɛayɛ yɛn ho atuu afew yɛn ho ano. Afei ɔka kyerɛ me sɛ ɔdɔ me, na me nso meka sɛ medɔ no. Da a owui no mpo, yɛyɛɛ saa ansa na ɔrefi fie. Me kunu wu no ayɛ me yaw paa; mfe nsia atwam, nanso meda so ara di ho yaw wɔ me mu. Minnye nni sɛ me werɛ befi Rob da.”—Gail; wadi mfe 60.
“Me yere wui no bɛyɛ mfe 18 ni, nanso meda so ara kae no, na midi ne wu no ho awerɛhow. Sɛ menam na m’ani bɔ biribi a ɛyɛ fɛ so a, na makae me yere. Ɛba saa a, nea meka ara ne sɛ, ‘Ah me dɔfo wɔ he, ɔmmɛhwɛ!’”—Etienne; wadi mfe 84.
Wei nyinaa ma yehu sɛ, sɛ wo biribi wu na wudi ho yaw kyɛ a, ne kwan so a. Sɛ ade tɔ yɛn ani a, ɛsono sɛnea obiara di ho awerɛhow, enti sɛnea obi yɛ ne de no, ɛnsɛ sɛ yɛkasa tia. Afei ɛkɔba sɛ yedi awerɛhow ma ɛyɛ sɛ nea aboro so a, ɛnsɛ sɛ yɛte nka sɛ yɛayɛ bɔne. Ɛnde sɛ woredi awerɛhow a, wobɛyɛ dɛn anya awerɛkyekye?
^ nky. 4 Sɛ wokenkan asɛm a wɔato din “Suasua Wɔn Gyidi” a ɛwɔ Ɔwɛn-Aban yi mu no a, wubehu sɛ Abraham ba Isak nso, bere a ne maame Sara wui no, odii awerɛhow kyɛe. Mfe mmiɛnsa twaam, nanso na ɔda so ara di awerɛhow.—Genesis 24:67.
Awerɛkyekyesɛm pii wɔ Bible mu a aboa nnipa bebree.